अन्य प्रदेशमा स्वतन्त्ररुपमा मनोनयन दर्ता गर्ने राजपासँग सहमति भएको छ : गृहमन्त्री
चन्द्रकान्त खनाल, रुपन्देही, ५ असार । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचन सारिएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग अन्य प्रदेशमा स्वतन्त्र रुपमा मनोनयन दर्ता गर्ने सहमति भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको सहमतिकै आधारमा राजपाले निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराएको गृहमन्त्री शर्माले स्पष्ट पारे ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा बुटवलमा आयोजित सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्रीले यस्तो दाबी गरेका हुन् । गृहमन्त्री शर्माको उपस्थितिमा रुपन्देही सहित ६ जिल्लाका प्रमुखहरुको बैठक भएको हो ।
बैठकमा गृह सचिव लोक दर्शन रेग्मी, निर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाह, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक बेगेन्द्र शर्मा पौडेल, नेपाली सेनाका रथी बलदेवराज महत, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक दिलिपराज रेग्मीको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री शर्माले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जनताले ढुक्कसंग मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने बताए । मनोनयनका क्रममा कपिलवस्तुमा भएको घटनालाई सूक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गरिएको भन्दै उनले आगामी दिनमा त्यस्ता घटना हुन नदिन सुरक्षा निकाय तयार रहेको बताए ।
सुरक्षा बैठकमा रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो ।
रौतहटबाट धनकुटाका लागि छुटेको बस दुर्घटना
रौतहट, ५ असार । धनकुटाको भेडेटारस्थित भोजपुरे गोलाईमा यात्रुबस दुर्घटना हुँदा ३४ जना घाइते भएका छन् । रौतहटबाट धनकुटाको पाख्रिबास कृषि अनुसन्धान केन्द्रतर्फ अध्ययन भ्रमणको टोली लिएर आउँदै गरेको ना ५ ख ३३२८ नं को बस मंगलबार
राजपाको राजनीतिक समितिको दोस्रो दिनको बैठक सम्पन्न, बैठकमा के–के भयो ?
काठमाडौं, ५ असार । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको राजनीतिक समितिको दोस्रो दिनको बैठक सम्पन्न भएको छ । सोमबारदेखि सुरु भएको राजनीतिक समितिको बैठक बुधबारसम्म चल्नेछ ।
नारायणी अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्दैछौं : स्वास्थ्यमन्त्री यादव
वीरगन्ज, ५ असार । उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले मंगलबार वीरगन्जस्थित नारायणी अञ्चल अस्पतालको निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षणपछि मन्तव्य राख्दै स्वास्थ्य मन्त्री यादवले देशकै पुरानो अञ्चल अस्पताल भएपनि
सरोकारवालाहरुले भने– सिकाइ सुर्धान अभियान खै ?
काठमाडौं, ५ असार । विद्यालय स्तरको खस्कदो सिकाइ उपलब्धि प्रति सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले सिकाइ सुधारका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
कैलालीमा टिपरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा महिलाको मृत्यु
कैलाली, ५ असार । कैलालीमा टिपरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । धनगढी उपमहानगरपालीका–४ भगवती टोलमा से.१ क ८३८ नम्बरको टिपरले म.१ प ३३८० नम्बरको मोटरसाइकललाई मंगलबार ठक्कर दिँदा